TOLIARA : Ramanevy Saroy Soarae, Zazavavy mpianatra 11 taona afaka bakalorea sokajy D
Ramanevy Saroy Soarae no mpianatra zandriny indrindra tamin’ireo nanala fanadinana bakalorea ary afaka soa aman-tsara tany Toliara. 29 août 2017
Vao 11 taona ity zazavavy kely ity ary ny sokajy D no nosafidiany.
Tao amin’ny sekoly Memorial School Toliara ao an-tampon-tanànan’i Toliara no nianarany. Voalaza fa tsy tany an-tsekoly i Soarae tamin’ny fahakeliny, fa nisy mpampianatra nampianatra azy manokana nandritra izany tany an-tranon’ny ray aman-
Nanomboka ny kilasy faharoa vao niditra an-tsekoly i Soarae rehefa avy afaka BEPC. Avy any Ambovombe ny fiaviany ary ny ray aman-dreniny dia mpampianatra amin’ny oniversite, araka ny loharanom-baovao. Voalaza ihany koa fa ny taranja Frantsay, matematika ary ny Siansa no tiany ka nahatonga azy nisafidy ny sokajy D. Arahabaina fa afaka soa aman-tsara, mirary azy ho tonga amin’ny tanjona iriny.
Tovolahy mpangarom-paosy tokony ho 28 taona saika matin’ny fitsaram-bahoaka AMBODIMITA (3549) 18 février 2021 Ho fantatra tsy ho ela ny anaran’ireo olona ambony voarohirohy FANODINKODINANA VOLAM-PANJAKANA (340) 18 février 2021 Nitafy fahafaham-baraka tanteraka ireo Mpanohitra HETSIKA FANAKORONTANANA (209) 22 février 2021 Miantso ny vahoaka tsy hanaiky horebireben’ny mpanakorontana ny FMIEM HETSIKY NY MPANOHITRA (109) 18 février 2021 Nokaramaina ireo olona nanakan-dalana tamin’ny vato JENERALY RAVALOMANANA RICHARD (99) 22 février 2021 Mpanafika taksimoto iray maty voatifitra, valo azo sambo-belona ANDILAMENA (80) 18 février 2021